Sumcadda macallimmiinta oo aad dhulka hoos u gashey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sumcadda macallimmiinta oo aad dhulka hoos u gashey
La daabacay onsdag 27 mars 2013 kl 16.17
Mushaarooyinka macallimmiintu waa mid aan u kordhin si la mid ah hoowlaha kale
Sawirle: Mårten Nilsson/SR.
Dalka ayey ku yar yihiin dadyoowga dooneya iney galaan jaamicadaha lagu barto culuunta macallin-nimo, waana midda suuratgelisey in dadyoowga galeya jaamicadaha ey ka sitaan imtixaanka wax-barashada sare dhibco aad u hooseeya, sida uu qeexay war-geeyska maalinlaha ee Dagens Nyheter. Dhanka kale maahan mushaarooyinka macallimiintu kuwo lagu lacageeysan karo, maadaama uu aad dib uga dhacay kororka mushaarooyinka ee shaqooyinka kale.
Tira-koobyo hor leh ayaa qeexaya inuu aad hoos ugu dhacay meeqaanka laga heysto xirfadda shaqo ee macallin-nimo. Si haddaba suurtagal loogu helo in ardey laga noqdo goobaha tacliinta sare ee macallin-nimada lagu barto ayaa loo baahayn yahey dhibco aad u hooseeya illaa iyo xad gaarsiisan 0,1 ee imtixaanka loo galo tacliinta sare, waxa loo yaqaanno "Högskoleprovet" waana buundada ugu hooseeysa ee jaamacad lagu galo.
Si lagu helo dhibco gaarsiisan 0,4 ayaad imtixaanka aad geli kartaa adiga oo aan su'aalahana akhrin oo xarafka "c" un dhammaan ku jawaaba inay tahay jawaabta saxda ah, sida uu war-geeysku qoray (dhibcaha ugu sarreeya ayaa ah 2,0). Halka dhowr jaamicadood oo war-geeysku la xiriirey ey sheegeen in ardeyda qaarkood u baahan yihiin taageero dheeri ah, si ey tacliintooda u dhameeystaan.
Sidoo kale waxaa saameeyn middaa ku yeeshay meeqaanka laga haysto xirfadda macallin-nimo. Iyada oo muddo 15 sannadood ah ey mushaarooyinka macallimmiintu kor u kaceen 15,5%. Middaa ayaa loo barbar-dhigi karaa mushaarka macallimiinta jabaaneeska oo kor u kacey isla muddadaa 76%, Iirland 65%. Eva-Lis Syrén, hogaamiyaha ururka dalladda macallimiinta ayaa sheegtay in aaney xisaabtani aheyn mid ka fajacisa.
- Waa hoowlo sidaa u socdey illaa iyo toddobaatameeyadii oo aheyd wixii ka dambeeyey intii aan dawladda gacanteeda laga saarin masuuliyadda iskuullada. Dhanka kale waxaan aragnaa hoowlaha adeegga tirada badan ee macallimiintu maanta qabtaan, haddey noqon lahayd diiwaan-gelin, hoowlo la xiriira waraaqo maamaul iyo qorsheeyn. Waa in howlahaa laga dul-qaadaa macallimmiinta iyo sidoo kale in macallimmiintu awood u yeeshaan iney fikirradooda ka dhiibtaan halkii xoogga la gelin lahaa, si arday walba uu u helo taageeradii uu u baahnaa. Waa hoowlaha loo baahan yahay, isla-markaana is-bedelka hor-seedi kara.
Hase yeeshee ururka shaqaalaha macallimmiintu kuma guuleeysan inuu kor u qaado mushaarka bareyaasha, inakstoo xaaladan lagu guda jirey muddo dheer. Ma la oran karaa waa guul-darro idin-la soo gudboonaatay ka urur ahaan?
- Muddo aad u dheer ayaan heshiis kula jirney masuuliyiinta iskuullada ey degmooyinku maamulaan iyo kuwa madaxa bannaanba sidii miisaaniyad dheeri ah ey u gelin lahaayeen iyo sidoo kale dhanka dawladda. Waxaan jeclaan lahaa inaan iraahdo, in mugdigu ugu badan yahay kolka uu iftiinku soo muuqdo. Iminka waxaa noo muuqata sida ay dawladdu miisaaniyad dheeri ah ugu qoondeeynayso sidii kor loogu qaadi lahaa mushaarooyinka macallimmiinta, nasiib darro waa dhaqaale yar, dhanka kale kama wanaag-sana xaaladdoodu nasiib-darro macallimmiinta ka howl-gasha dugsiyada madaxa-bannaan. Dalku wuxuu ku jiraa xaalad adag ee dhanka macallimmiinta. Waa mid iminka looga fadhiyo siyaasiyiinta iney go'aan ka gaaraan sidii wax looga qaban lahaa. Waxaana loo baahan yahay mushaarooyin ka sarreeya ee dhan walba ah, sida ay sheegtay Eva-Lis Syrén, hogaamiyaha ururka daladda macallimiinta.